Kuseyingxaki ukushaywa kwamagoli - Bayede News
Kuseyingxaki ukushaywa kwamagoli
NGINOKUDUMALA ngezinto ezimbi ezenzeka kuPremier Soccer League enye yazo okungukushaywa kwamagoli. Uma ngikhuluma ngokugqoza kwamagoli ngisho ukuthi kuleli kuba nzima nokuthi uma kuphela isizini kube khona umdlali oweva eshumini nanhlanu ngokushaywa kwamagoli.
Nakule sizini yowezi-2018/19 ngibona umdlali ozoba namagoli amaningi ezoba mancane amathuba okuthi azithole eshaye amagoli ali-15 nangaphezulu. Kule sizini esikuyo amaqembu asedlale imidlalo eli-18 lokho kusho ukuthi kusele imidlalo eli-12 isongwe isizini, kodwa umdlali okunguyena ohamba phambili ngamagoli unayi-8 lowo mdlali uMwape Musonda weBlack Leopards.
Ngingakusho ngaphandle kokungabaza ukuthi kusazothatha iminyaka ukuthi ngibone umdlali ozoshaya amagoli angaphezulu kwangama-20, njengoba kwake kwenza uCollins Mbesuma ngesizini yangowezi-2004/05 ngesikhathi evalela phakathi amagoli angama-25 edlale imidlalo engama-33. Ngaleso sikhathi wayegijima kuKaizer Chiefs.
Ngingomunye owamjabulela lo mgadli, kungekhona ukuthi ngangimthanda kodwa wasibuyisa isithunzi sale ligi ngalowo nyaka.
Kusukela ngaleyo sizini uyedwa kuphela umdlali oseke washaya amagoli angama-20. Lowo nguSiyabonga “Bhele” Nomvethe owashaya angama-20 egijima kuMoroka Swallows.
Ngesizini yangowezi-2005/06 umdlali owaba namagoli amaningi uMame Niang owashaya ali-14 egijima kuMoroka Swallows, ngelandelayo yangowezi-2007/08 kwaba uChristopher Katongo owayegijima kwezeNkosi, iJomo Cosmos, owaba nali-15, kwathi ngowezi-2008/09 kwaba umufi uRichard Henyekanye owayelibamba kuLamontville Golden Arrows owavalela phakathi ali-19. Kuthe ngesizini yangowezi-2009/10 uKatlego “Killer” Mphela edlalela iMamelodi Sundowns kwaba nguye ovalela phakathi amaningi abali-17, kwaba uKnowledge Musona edlalela iKaizer Chiefs washaya ali-15 ngesizini yangowezi-2010/11. UBernad Parker ngesizini yangowezi-2012/13 wazifaka naye emabhukwini omlando kuleli kubadlali abaseke bashaya amagoli amaningi ngesizini wavalela phakathi ali-12, uKatlego “Mahoota” Mashego wamlandela ngesizini yangowezi-2013/14 wavalela phakathi ali-13 edlala kuSwallows.
UParker wakuphinda lokho ngesizini yangowezi-2014/15 eshaya amagoli ali-10, noMbesuma wabuya ngesizini elandelayo esedlala eqenjini laseMpumalanga iMpumalanga Black Aces eshaya li-14. Kuthe ngesizini yangowezi-2016/17 uLebohang Manyama naye wazifaka emabhukwini akuleli eshaya amaglo ali-13 egijima kuCape Town City, ngesizini edlule babili abadlali abashaye abagoli amaningi uRodney Ramagalela wePolokwane City noPercy Tau egijima kumaBrazillian (iSundowns) ababe nail-11.
Okungiphatha kabuhlungu ukuthi singakayi phesheya kwezilwandle, ngiselapha e-Afrika kwamanye amaligi kungcono kunalapha eNingizimu Afrika. Kuligi yase-Egypt i-Egyptian Premier League umdlali ohamba phamabili ngamagoli uMahmoud Alea weZamalek emdlweni eli-15 unamagoli ali-10.
Kuligi yaseNigeria umuntu obe namagoli amaningi ngesizini yangowezi-2017/18 uMfon Udoh ovalele phakathi angama-23. Muva nje kuligi yaseZimbabwe umdlali oonamagoli amaningi uRodwell Chinyengetere weFC Platinum ushaye ali-17.
Uma ngiyaphesheya kwezilwandle ngivele ngiphatheke kabuhlungu kakhulu ngoba kungikhombisa ngobala ukuthi kuleli siphansi kakhulu. Kuligi yase-England i-English Premier League (EPL) umdlali onamagoli amaningi uMohamed Salah odlalela iLiverpool FC osevalele phakathi ali-16, kuligi yaseSpain iSpanish La Liga ohamba phambili uLionel Messi weFC Barcelona onali-19, kweyaseFrance iFrench League 1 uKylian Mbappe weParis Saint-Germain unayi-18, kuthi kweyase-Italy iSeria A kube uFabio Quagliarella weSampdoria onali-16.
Ezinyangeni ezimbili ezedlule ngajabula ngibona uNomvethe ephula irekhodi lokuba umdlali ohamba phambili ngokuvalela amagoli kuligi yakuleli. Yize ngangijabula kodwa inhliziyo yami yaba buhlungu ngenxa okwakwenza lokho isibalo neminyaka ethathile ukuthi leli rekhodi elabekwa uDaniel Modau wodumo kuMamelodi Sundowns.
Lelo rekhodi elamagoli ali-11O uNomvete muva nje unamagoli ali-112, ngibona kusazophinde kuthathe iminyaka ukuthi kube khona odlula uBhele (uNomvete).
Okwenza ngikhale ngalamagoli ingoba emasontweni amabili edlule isitobha seReal Madrid uSergio Ramos, besishaya igoli laso le-100. Lokho kusho ukuthi umdlali esithi nguye ohamba phambili ngamagoli ulingana nomdlali oyisitobha.
Okungenhla kungishiya nombuzo ukuthi ukugqoza kwamagoli kwenziwa ukuthi sino nozinti nezitobha ezikhaliphile, noma abagadli bazihlulekela bona ukushaya amagoli? Mhlawumbe ngelinye ilanga ngophenduleka.
Phezu kwakho konke lokhu iligi yaseNingizimu Afrika iPremier Soccer League (PSL) ikleliswe yaba ngeyokuqala e-Afrika yi-International Federation of Football. Lokhu kungenxa yokuphathwa, umnotho nokusakazwa kwemidlalo yePSL. Kungaba kuhle kuthokozise ukuthi lokhu kuthathelwa phezulu kwePSL amazwe omhlaba kuhambisane nokushaywa kwamagoli okuyinto abalandeli bebhola abayilambele.